Koety: Fitetezana, Fitsangatsanganana ary Maro Kokoa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Oktobra 2018 11:22 GMT
Manohy mitoraka blaogy mikasika ny zavatra ataony foana ao anatiny sy ivelan'ny fireneny ireo Koetiana blaogera.
Mitsidika ny foaram-boky Koetiana i Forzaq8 ary mitatitra mikasika izany toy izao:
Eny, nankeny àry aho, nividy boky maromaro, ary naka sary vitsivitsy 🙂
Tsy dia misy boky amin'ny teny Anglisy any raha toa ka mitady izany ianao fa amin'ny teny Arabo avokoa ny ankamaroany
Miresaka mikasika ny gazety ao Koety i Q over ao amin'ny Kuwaitism. Manoratra izy:
Nisy gazety vaovao maro teny an-tsena. Naneho hevitra mikasika ny tsy fahampiana fahaiza-mamorona ao amin'ny famokaran'izy ireo ny namana iray, efa roa andro lasa izay, nifanaraka avokoa izy ireo amin'ny ankapobeny,
Tafaverina avy any amin'ny GulfRun ihany koa ny blaogera sasany – ny sasany tamin'izy ireo niaraka tamin'ny sary sy tatitra mikasika ilay hazakazaka fiara natao tany Bahrain.
Manome fanavaozambaovao ho antsika mikasika ny diany nankany Bahrain ny The Stallion avy ao amin'ny “The Stallion’s Stable of Thoughts and Experiences” .
Toy ny efa fantatry ny maro aminareo, natao tamin'ny faran'ny herinandro teo ny GulfRun 3! Namily ny Land Cruiser-nay ny tenako sy ny zokiko lahimatoa, nitarika ny fiarasarihana izay nitondra solika 300 litatra, kodiarana 8, kojakoja ho an'ny hisatra, menaka, rano ary fitaovana!
Mamoaka lahatsoratra (anatin'ireo lahatsoratra hafa sasany) mikasika ny fitaterana fiara handray anjara amin'ny GulfRun i Marzouq avy ao amin'ny zdistrict.
Tsy maintsy milaza aho fa tena gaga tamin'ny fomba nitondran'izy ireo zavatra nandritra ity hetsika iray manontolo ity, maro ny zavatra nitranga ary tamin'ny fiverenana, tsy maintsy nanomana betsaka manokana tokoa izy ireo satria toy ny mamakivaky helo ny mandalo ny Sisintany Saodiana. Nohasarotin-dry zareo araka izay vitany izany, saingy ireo mpikarakara ihany no mitantana ireo fiara fa tsy ireo mpitatitra.
Mandritra izany fotoana izany, manolotra amintsika ireo fivarotana entana fahagola ao Koety ny Kuwait Advertiser.
Nasaina namana Koetiana iray hankany amin'ny namany iray aho, izay mitana Tsena Fivoarotana Entana Fahagola. (Manana efatra izy raha ny marina.) Nientanentana be aho satria samy tia entana fahagola avokoa izaho sy ny vadiko ary manana tahiry maromaro ato an-trano.
Tohizantsika ny fitetezantsika isan-kerinandro ao anatin'ny tontolon'ny blaogy Koetiana miaraka amin'i Hellraiser, izay mitantara ny fitsidihana nataony tamin'ny môtô ao amin'ny blaoginy Kuwait to Beirut. Mbola any Libanona izy fa mikasa ny hanohy ny làlana indray ato ho ato.
Tamin'ny fahatanorako, nandany 5 herinandro isantaona tany Sannine izahay, talohan'ny Ady Libaney tamin'ny 1974 izahay no tany farany
Farany fa tsy ny kely indrindra, nahita zavatra hafahafa i Bo9agr tany amin'ny tsena teny an-toerana. Manoratra izy:
Nahita ity tao amin'ny co-op-nay aho (jam3iya), izay milaza hoe Menaka Hashish Afghana !! tsy nofaritan'izy ireo hoe atao inona, ho an'ny volo? vatana? sa ho evohana??